Fanafihan-jiolahy mitam-piadiana: volabe antapitrisa Ar voaroba, iray maty voatifitra, iray hafa naratra | NewsMada
Par Taratra sur 02/12/2020
Tranga fanafihan-jiolahy mitam-piadiana roa samy hafa nefa heverina ho misy ifandraisany ireto nitranga tao Toamasina, ny alin’ny alatsinainy teo, ireto. Lehilahy iray avy naka volabe saika hividianana jirofo naratra voatifitra tao anaty taksiborosy. Ny alin’io ihany, tovolahy iray, heverina ho mpitondra Bajaj kosa, maty nisy nanatitra tao amin’ny hopitaly.
Raha ny tatitra voaray avy amin’ny lehiben’ny “commissariat central” ao Toamasina, ny kaomisera Rakotovao Jean Christian, nitrangana fanafihan-jiolahy mitam-piadiana mahery vaika nahaverezana volabe antapitrisa Ar teo anoloan’ny toerana fanampiana rivotra ho an’ny kodiarana fiara ao Ambohijafy Avaratra, Toamasina, akaikin’ny sampanan-dalana mitsofoka any Andranomadio tamin’io fotoana io. Raim-pianakaviana iray avy naka vola hividianana jirofo any ambanivohitry ny faritra Analanjirofo tao amina mpandraharaha iray ao Antsiranampasika ity voatafika ity. Taorian’ny nahazoany io vola io anefa, mbola nandeha tany Bazarikely aloha izy sy ny namany iray hafa nandoa vola vidin’entana hafa mialoha ny nandraisany taksiborosy teo amin’ny fiantsonana Tanambao Fahadimy. Feno ilay taksiborosy Sprinter, nanainga nihazo ny lalam-pirenena fahadimy (RN5) ka nony tonga teo Ambohijafy, nanampy rivotra ny kodiaran’ny fiara ny mpamily. Nandritra izany indrindra no nitranga ny fanafihana. Nisy jiolahy nanambana basy ny mpamily teo aloha; ny iray faharoa kosa, niditra teo amin’ny varavarana amin’ny sisiny izay nisokatra nandritra ny nivoahan’ny mpamily mpanampy. Nanambana basy ny mpandeha rehetra tao anaty taksiborosy ilay jiolahy sady nitifitra ny tanan’ilay raim-pianakaviana nihazo ny sakaosy misy ny volabe. “Tsy afa-nanohitra izahay noho ny basy teny am-pelatanan’ireo jiolahy”, hoy ireo mpandeha tao anaty taksiborosy.
Fatin’olona iray nisy nanatitra tao amin’ny Hopitalibe…
Tsy hay na misy ifandraisany amin’ity raharaha ity ihany ny fatin’olona iray nisy nanatitra tao amin’ny sampana vonjy taitra ao amin’ny Hopitalibe Toamasina, afakomaly tamin’ny 7 ora hariva. Tsy hita anefa izay nanjavonan’ilay lehilahy nanatitra azy tao amin’ny hopitaly. Niezaka nitsabo ilay niharam-boina ihany ny hopitaly, saingy tsy avotra intsony ilay niharam-boina. Tsy nahitana antontan-taratasy ahafantarana azy rahateo tany aminy. Nisy loharanom-baovao hafa anefa nilaza fa mpamily Bajaj ity tovolahy nisy nanatitra tao amin’ny Hopitalibe ity. Ahina ho nisy Bajaj voaendaka indray tany ho any ka mba tsy hahafantarana ireo jiolahy, nentin’ireo olon-dratsy ity mpamily ity ka novonoin’izy ireo. Tsy nisy famantarana mihitsy ny nisehoan’ny famonoana na ny fahafatesany, na ny toerana nandraisana azy tao amin’ny hopitaly.